TP-PF Series milina famenoana - Shanghai Tops Group Co., Ltd.
Masinina famenoana aug-PF Series
TP-PF Series auger milina famenoana no milina dosing izay mameno habetsaky ny vokatra ao anaty fitoerany (tavoahangy, kitapo siny sns). mety amin'ny famenoana vovoka na vovoka granular.
Ny vokatra dia voatahiry ao anaty hopper ary mamoaka ny akora avy amin'ny hopper miaraka amina visy mihodina amin'ny alàlan'ny feeder dosing, isaky ny tsingerina dia mamoaka habetsaky ny vokatra efa voafaritra ao anaty fonosana ilay visy.
Shanghai TOPS GROUP dia nifantoka tamin'ny milina fametahana vovoka sy metara. Tao anatin'ny folo taona lasa, nianatra teknolojia mandroso be dia be isika ary nampihatra izany tamin'ny fanatsarana ny masininay.
Satria ny fitsipiky ny masinina famenoana auger dia ny fanaparitahana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny visy, ny fahamendrehan'ny visy dia mamaritra ny marina amin'ny fizarana ilay fitaovana.
Ny visy kely dia nohodidinin'ny milina fikosoham-bary mba hahazoana antoka fa mitovy tanteraka ny lelan'ny visy tsirairay. Ny diplaoma faran'ny ambony indrindra azo zahana.
Ankoatr'izay, ny motera mpizara tsy miankina dia mifehy ny fiasan'ny visy, ny motera mpizara tsy miankina. Araka ny baiko dia hifindra amin'ny toerana ny servo ary hihazona izany toerana izany. Ny fitazonana ny fahamendrehana famenoana tsara fa tsy ny motera mandeha.
Ny milina TP-PF Series rehetra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, fitaovana tsy misy fangarony 316 azo ampiasaina arakaraka ny fitaovan'ny toetrany samihafa toy ny fitaovana manimba.
Ny sombin'ilay masinina dia ampifandraisina amin'ny alàlan'ny welding sy poloney feno, ary koa ny elanelana amin'ny hopper, feno welding ary tsy misy banga, mora diovina.
Talohan'izay, ny hopper dia natambatra hopper ambony sy midina ary tsy mahasorena handravana sy hadio.
nohatsarainay ny endriny misokatra misokatra amin'ny hopper, tsy mila manafoana ny kojakoja rehetra isika fa mila manokatra ny lozam-pifamoivoizana haingana fotsiny amin'ny hopper raikitra hanadiovana ny hopper.
Mampihena be ny fotoana hanoloana ireo fitaovana sy fanadiovana ny masinina.
Ny masinina TP-PF Series auger karazana famenoana vovoka dia voapetraka amin'ny alàlan'ny efijery PLC sy Touch, ny Operator dia afaka manitsy ny lanjan'ny famenoana ary manao ny faran'ny parameter eo amin'ny efijery mivantana.
Miaraka amin'ny fahatsiarovan'ny vokatra
Orinasa maro no hisolo ny akora samy hafa karazana sy lanjany mandritra ny fizotry ny famokarana. Ny milina famenon'ny vovoka Auger dia afaka mitahiry endrika 10 samihafa. Rehefa te hanova vokatra hafa ianao dia mila mahita ny raikipohy mifandraika ihany. Tsy ilaina ny mizaha toetra imbetsaka alohan'ny fonosana. Tena mety sy mety.
Fifanarahana amin'ny fiteny maro
Ny fanaingoana mahazatra ny efijery mikasika dia amin'ny kinova anglisy. Raha mila fanahafana amin'ny fiteny samihafa ianao dia afaka manamboatra ny interface amin'ny fiteny samihafa arakaraka ny zavatra takinao.
Miasa Miaraka amin'ny fitaovana samihafa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny famokarana samihafa
Ny milina famenoana Auger dia azo atambatra amin'ny milina samihafa mba hamoronana fomba fiasa vaovao hihaonana amin'ny fitakiana famokarana samihafa.
Izy io dia afaka miasa miaraka amin'ny fehikibo conveyor linear, mety amin'ny famenoana mandeha ho azy ny karazana tavoahangy na siny.
Ny milina famenoana Auger dia azo amboarina miaraka amin'ny latabatra fihodinana, izay mety amin'ny fonosana tavoahangy tokana.
Mandritra izany fotoana izany dia afaka miasa miaraka amin'ny milina doypack mandeha ho azy ihany koa ny Rotary sy ny Linear mba hahatsapa ny fonosana kitapo mandeha ho azy.
Ampahany fanaraha-maso herinaratra
Ny marika elektrika rehetra dia marika iraisam-pirenena fanta-daza, ny mpampifandray mpampita dia ny marika Omron sy ny contactors, ny varingarina SMC, ny motera servo marika Taiwan Delta, izay afaka miantoka ny fahombiazan'ny asa tsara.
Na inona na inona fahasimbana elektrika mandritra ny fampiasana dia azonao atao ny mividy azy eo an-toerana sy manolo azy.
Ny marika misy ny marika rehetra dia ny marika SKF, izay afaka miantoka ny asa maharitra tsy misy hadisoana amin'ny masinina.
Ny ampahany amin'ny milina dia mivondrona mifanaraka amin'ny fenitra, na eo aza ny milina poakaty mihodina tsy misy fitaovana ao anatiny, ny visy dia tsy hanafoana ny rindrin'ny hopper.
Afaka miova amin'ny mavesatra mavesatra
Ny masinina fameno vovoka Auger dia afaka manampy amin'ny cell load miaraka amin'ny rafitra mavesatra mavesatra. Hamarino tsara ny famenoana avo.
Ny haben'ny auger hafa dia mihaona amin'ny lanjan'ny famenoana
Mba hahazoana antoka fa ny famenoana ny marina, ny visy iray dia mety amin'ny lanjan'ny lanjany iray, matetika:
19mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 5g-20g.
24mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 10g-40g.
28mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 25g-70g.
34mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana vokatra 50g-120g.
38mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 100g-250g.
41mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 230g-350g.
47mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 330g-550g.
51mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana vokatra 500g-800g.
59mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 700g-1100g.
64mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana vokatra 1000g-1500g.
77mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 2500g-3500g.
88mm savaivony auger dia mety amin'ny famenoana ny vokatra 3500g-5000g.
Ny habe auger etsy ambony mifanentana amin'ny famenoana lanja Ity haben'ny visy ity dia natao ho an'ny fitaovana mahazatra ihany. Raha miavaka ny mampiavaka ny fitaovana dia hisafidy habe auger isan-karazany isika arakaraka ny tena fitaovana.
Fampiharana masinina fameno vovoka auger amin'ny tsipika famokarana samihafa
Ⅰ. Masinina mameno Auger amin'ny tsipika famokarana semi-mandeha ho azy
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny mpiasa dia hametraka ny akora ao anaty mixer arakaraka ny fizarana tanana. Ireo akora fototra dia hafangaro amin'ny mixer ary hiditra amin'ny hopper tetezamita ny feeder. Avy eo dia hoentina izy ireo ary hoentina ao anaty hopper an'ny milina famenoana semi automatique auger izay afaka mandrefy sy mizara fitaovana amin'ny vola sasany.
Ny masinina fameno vovoka semi-automatique automatique dia afaka mifehy ny fiasan'ny feeder screw, amin'ny hopper masinina famenoana, misy ny sensor, manome famantarana ny feeder screw raha ambany ny haavon'ny materialy, dia mandeha ho azy ny feeder screw.
Rehefa feno fitaovana ny hopper dia manome signal ny feeder screw ary ny feeder screw dia hijanona tsy mandeha ho azy.
Ity tsipika famokarana ity dia mety ho an'ny tavoahangy / siny sy famenoana kitapo, satria tsy fomba fiasa mandeha ho azy tanteraka izy io, mety ho an'ny mpanjifa manana fahaiza-manao famokarana kely.
Famaritana ny maodely samihafa an'ny milina famenoana vovoka semi-automatique automatique
Efijery PLC & Touch
Amin'ny cell cell
Hevitra momba ny lanjany
Amin'ny ambaratonga ivelan'ny tsipika (amin'ny sary)
Amin'ny ambaratonga ivelan'ny tsipika (in
Fanehoan-kevitra momba ny lanja amin'ny Internet
≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g,
≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0,5%
40 - 120 fotoana isaky ny
40 - 120 isaky ny min
Ⅱ. Masinina mameno Auger ao anaty tsipika famokarana tavoahangy / siny mandeha ho azy
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny milina famenoana auger mandeha ho azy dia miaraka amin'ny conveyor linear izay afaka mahatsapa fonosana mandeha ho azy sy famenoana tavoahangy / siny.
Ity karazana fonosana ity dia mety amin'ny karazana fonosana tavoahangy / tavoara, tsy mety amin'ny fonosana kitapo mandeha ho azy.
≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 –500g,
40 - 120 isaky ny
Ⅲ. Masinina mameno Auger ao anaty tsipika famokarana tavoahangy / tavoahangy feno famenoana
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny milina famenoana automatique automatique auger dia miaraka amin'ny chuck rotary, izay afaka mahatsapa ny asan'ny famenoana automatique an'ny can / jar / tavoahangy. Satria ny chuck rotary dia namboarina mifanaraka amin'ny haben'ny tavoahangy manokana, noho izany ity karazana masinina fonosana ity dia mety amin'ny tavoahangy / siny / kapoaka tokana.
Mandritra izany fotoana izany, ny chuck mihodina dia afaka mametraka tsara ny tavoahangy, ka io fomba fonosana io dia tena mety amin'ny tavoahangy misy vava kely ary mahazo vokatra feno.
Ⅳ. Masinina mameno Auger amin'ny tsipika famokarana fonosana automatique
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny milina famenoana auger dia misy milina famonosana mini-doypack.
Ny milina doypack mini dia afaka mahatsapa ny asan'ny fanomezana kitapo, ny fanokafana kitapo, ny fanokafana ny zipper, ny famenoana sy ny famehezana ary ny fahatsapana ny fonosana kitapo mandeha ho azy. satria ny asan'ity milina famonosana ity dia azo tanterahina amin'ny toeram-piasana iray, ny hafainganam-pandehan'ny fonosana dia manodidina ny 5-10 fonosana isa-minitra, noho izany dia mety amin'ny ozinina manana takiana famokarana kely.
Ⅴ. Masinina mameno Auger amin'ny tsipika famokarana fonosana kitapo rotary
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny milina famenoana auger dia misy milina fametahana doypack rotary 6/8.
Izy io dia afaka mahatsapa ny asan'ny fanomezana kitapo, ny fanokafana kitapo, ny fanokafana ny zipper, ny famenoana ary ny famehezana, ny asan'ity milina fonosana ity dia azo tsapain-tanana amin'ny toeram-piasana isan-karazany, ka haingana be ny hafainganan'ny fonosana, manodidina ny 25-40bags / isa-minitra. noho izany dia mety amin'ny ozinina manana fepetra takiana amin'ny famokarana lehibe.
Ⅵ. Masinina mameno Auger amin'ny tsipika famokarana fonosana karazana kitapo
Amin'ity tsipika famokarana ity, ny milina famenoana auger dia misy milina famonosana doypack karazana.
Izy io dia afaka mahatsapa ny asan'ny fanomezana kitapo, ny fanokafana kitapo, ny fanokafana ny zipper, ny famenoana ary ny famehezana, ny asan'ity milina fonosana ity dia azo tsapain-tanana amin'ny toeram-piasana isan-karazany, noho izany ny hafainganam-pandehan'ny entana dia haingana dia haingana, manodidina ny 10-30 -bags / isa-minitra, ka dia mety ho an'ny orinasa miaraka amin'ny fitakiana fahaiza-manao famokarana lehibe.
Raha ampitahaina amin'ny milina doypack rotary, ny fitsipika miasa dia saika mitovy, ny fahasamihafana misy eo amin'ity masinina roa ity dia endrika hafa.
1. Mpanamboatra milina famenoana indostrialy ve ianao?
Shanghai Tops Group Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny 2011, dia iray amin'ireo mpanamboatra milina famenoana auger any Shina, namidy ny masininay tamin'ny firenena mihoatra ny 80 eran'izao tontolo izao.
2. Manana mari-pankasitrahana CE ve ny masinina famenoana vovoka?
Eny, ny masininay rehetra dia ankatoavin'ny CE, ary manana mari-pankasitrahana volo famenon'ny vovoka auger.
3. Inona avy ireo vokatra azon'ny machine auger mameno vovoka?
Ny masinina fameno vovoka Auger dia afaka mameno ny vovo-dronono na granule kely ary ampiharina amin'ny sakafo, fanafody, simika sns.
Indostrian'ny sakafo: ny vovo-pisakafoanana na granule rehetra mifangaro toy ny lafarinina, lafarinina oat, vovoka proteinina, vovo-dronono, vovo-kafe, zava-manitra, vovo-sakay, vovo-dipoavatra, tsaramaso, vary, voamaina, sira, siramamy, sakafom-biby, paprika, vovoka cellulose microcrystalline, xylitol sns.
Indostrian'ny fivarotam-panafody: ny vovoka ara-pitsaboana na granule rehetra mifangaro toy ny vovoka aspirinina, vovoka ibuprofen, vovoka cephalosporin, vovoka amoxicillin, vovoka penicillin, clindamycin
vovoka, vovoka azithromycine, vovoka domperidone, vovoka amantadine, vovoka acetaminophen sns.
Indostrian'ny simika: ny karazana vovoka na indostria amin'ny fikolokoloana ny hoditra, toy ny vovoka voatoto, vovoka tarehy, loko, aloky ny maso, vovo-takolaka, vovoka manelatselatra, vovoka manasongadina, vovo-jaza, vovoka talcum, vovoka vy, soda lavenona, vovoka calciumate carbonate, poti-plastika, polyethylene sns.
4.Ahoana ny fisafidianana milina famenoana auger?
Alohan'ny hisafidiananao mpameno auger mety, azafady mba ampahafantaro ahy, inona ny toetranao amin'izao fotoana izao? raha orinasa vaovao ianao, mazàna ny milina fanangonana semi-mandeha dia mety aminao.
➢ Ny vokatrao
➢ Mameno lanja
. Fahaizan'ny famokarana
➢ Fenoy anaty kitapo na fitoeran-tavoahangy (tavoahangy na tavoara)
➢ Famatsiana herinaratra
5. Inona ny vidin'ny milina famenoana auger?
Manana milina fonosana vovoka samihafa izahay, miorina amin'ny vokatra samihafa, famenoana lanja, fahaiza-manao, safidy, fanaingoana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hahazoana ny vahaolana milina famenoana auger sahaza anao ary manolotra.